दिदीको अत्याचार अब धेरै दिन टिक्ने छैन- मोदी - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारदिदीको अत्याचार अब धेरै दिन टिक्ने छैन- मोदी
मैनागढीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको सम्भाषणको सम्पादित अंश
जसको जीवनको सबै कमाई लुटिदियो उनीहरूले दिदीलाई यही प्रश्न गरिरहेका छन्। सबैलाई थाहा छ, सारदा, नारदा ठगीको शिकार बनेकाहरूले के उनलाई छोड्छन् त? जो पनि होस्, लुटेरा हो भने उसलाई छोडिने छैन। जति नै नेता जुटाउन्, तर जनताले कञ्ची कञ्चीको हिसाब माग्नेछन्। म त चिटफण्ड घोटालामा लुटिनेहरूलाई विश्वास दिलाउन आएको हुँ, लुटाहाहरूलाई कानूनको दैलोसम्म पुऱ्याएरै छोड्नेछु।
भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउन कोलकत्तामा मञ्च बनाइँदैछ। आज त्यो त्यो व्यक्तिलाई मोदीसित डर लाग्दैछ, जो पुरै भ्रष्ट छन्। लुट्नेहरूलाई विदेशबाट पनि पक्रेर ल्याइँदैछ। दलाल र धोकेवाजहरूलाई बचाउनेहरूलाई मोदीले कहिल्यै सफल हुन दिने छैन।
यो ठाउँ महादेव भोलेनाथको आशिर्वाद प्राप्त ठाउँ हो। उनको चरणलाई नमन गर्छु। यो ठाउँ हाम्रा जनजातिका लागि काम गर्ने ठाकुर पञ्चानन धर्माको कर्मस्थल पनि हो। यो ठाउँ नेपाली भाषाका आदि कवि भानुभक्त आचार्यको पनि कर्मस्थल हो। म सबैलाई नमन गर्छु।
केही दिन अघि दुइ हजार करोडको लागतमा बनिने फोरलेनको हाइवेको उद्घाटन भयो। अब यो काम पूरा हुने वित्तिकै सिलगढी आउनजान सबैलाई सुविधा हुनेछ। तपाईँहरूलाई सुविधा दिन सरकारले कनेक्टिभिटी बलियो बनाउने काम गरिरहेको छ।
तपाईँहरूको दशकौं पुरानो माग पूरा भयो। कोलकाता हाईकोर्टको जलपाइगढी सर्किट बेन्चको उद्घाटन भयो। यस क्षेत्रका सबैलाई अब फाइदा हुनेछ। म सबैलाई बधाई दिन्छु। अब हाइकोर्टको लागि कलकत्ता गइरहनु पर्दैन।
आखिर किन चियावालासित दिदी किन चिडिन्छन्? चिया त यहाँको पहिचान हो। यहाँको कानून-व्यवस्थाको स्थिति ठिक छैन। युवाहरू पलायन भइरहेका छन्। सिञ्चाई परियोजना अल्झिएको छ। यस्तो अवस्था बनाएर पनि उनलाई कुनै पर्वाह नै छैन। पश्चिम बङ्गाल सरकारले माटोलाई बद्नाम गऱ्यो अनि मानिसलाई बाध्य पारियो।
यहाँको बार र उकिल दुवैलाई पनि बधाई। यो वेञ्चको कारण समय बाँच्ने भयो। काङ्ग्रेस होस्, कि तृणमूल होस् वा वामदल, तपाईँहरूको साग्रोगाह्रोसित उनीहरूलाई कुनै पर्वाह छैन।
यो खण्डपिठ पाउनु भयो। यसको लागि कोलकाता हाईकोर्टबाट बीस वर्ष अघि पहल गरिएको थियो। क्याविनेटले यसलाई मञ्जुरी दियो। अनि तपाईँको सपना पूरा भयो।
उत्तर बङ्गाल थ्री टीको लागि प्रसिद्ध छ। टिम्बर, टी र टूरिज्म। तर यी तिनैलाई कहिल्यै ध्यान दिइएन। सरकारले यसबारे कुनै काम गरेन। केन्द्रको एनडीए सरकारको नियत हो- सबैको साथ सबैको विकास। यही कारण यहाँका चिया बगानहरू हाम्रो सरकारले खोल्यो। चियाबारीका श्रमिकहरूको लागि खाता खोलिदियौं। अझ चियाबारीका श्रमिक परिवारको लागि एउटा ठूलो परियोजना पनि सरकारले बनाएको छ।
यस्तो योजना जुन स्वाधिनतापछि अहिलेसम्म बनिएको थिएन। अब चियाबारीमा काम गर्ने परिवारले पनि पेन्सन पाउनेछन्। असङ्गठित श्रमिकहरूहरूले साठीवर्षपछि प्रति महिना तीन हजार रुपियाँ पेन्सन पाउनेछन्। यसको लागि औसतन सय अंशदान हरेक महिना दिइनुपर्छ। जति अंशदान श्रमिकहरूले दिनेछन्, त्यति नै सरकारले उनीहरूको खातामा रुपियाँ हालिदिनेछ।
गरिबहरूले अहिलेसम्म नपाएका सबै सुविधा हाम्रो सरकारले दिनेछ। प्रधानमन्त्री जीवनज्योति योजना र दुर्घटना बीमा योजना हाम्रो सरकारले चलाइरहेको छ। सङ्कटको बेला गरिबलाई यो बीमा धेरै काम लाग्नेछ।
यी बीमा योजनाहरू हाम्रो सरकारले पश्चिम बङ्गालबाट नै शुरु गरेको थियो। यसमा अहिलेसम्म 21 करोड़ मानिस जोडिएका छन्। मैले कलकत्ताबाट नै यो शुरु गरेको थिएँ। तपाईँहरूले सस्तो दबाई पाइरहनु भएको छ।
पश्चिम बङ्गालमा 23 लाख तथा जलपाइगढीमा 65 हजार पक्का घर हाम्रै सरकारले बनायो। 2022 मा जब स्वाधिनताको 75 वर्ष पुग्छ, त्यतिबेलासम्म एउटै पनि कच्चा घर भारतमा हुने छैनन्। जलपाइगढीमा पैँसठ हजार मानिसलाई नयाँ घर बनाएर चाबी दिइएको छ। अरूले पनि पाउनेछन्।
मा, माटी र मानुषको नाममा, जसलाई तपाईँले सत्ता दिनु भयो, कम्युनिष्टबाट मुक्ति पाइन्छ भनेर उनलाई छान्नु भयो। आज दिदीको दादागिरी देखिरहनु भएको छ। उनले खडा गरेको सिन्डिकेटबारे त जान्नुहुन्छ नै, कसरी उनले लुटिरहेकी छन्। यसबाट मुक्ति चाहिन्छ कि चाहिन्न? पश्चिम बङ्गालमा हिंसाको अन्त हुनुपर्छ। जहाँ कम्युनिस्ट झण्डा फहरिन्थ्यो, त्यो त्रिपुरामा भाजपाले सरकार बनायो। त्रिपुरामा जे भयो, त्यो पश्चिम बङ्गालमा पनि हुनेछ। गुन्डागर्दीसित लड्नको लागि भाजपा कार्यकर्ता तयार रहनुहोस्।
देशको इतिहासमा पहिलोपल्ट देख्न पाइयो, कि हजारौं गरिबहरूलाई लुट्नेको पक्षमा मुख्यमन्त्री उभिइन्। लुट्नेको पक्षमा धरना बसिन्। लुटेराहरूको रक्षाको लागि?
जब जब देशलाई साँचो बताउनु, यस्तै हङ्गामा गरिदिन्छन्। उनको आफ्नो कुनै विचारधारा पनि छैन। देशकोलागि कुनै बिजन पनि होइनन्।
तपाईँ हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसका नेता भन्छन्, राज्यमा अराजकता छ। तर दिल्लीमा उनका मिस्टर वार्डाका सालो त्यो देख्दैनन्। यहाँको सरकार त अनुप्रवेशकारीहरूलाई पनि स्वागत जनाउँछन्।
तर देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भाजपाका नेताहरूलाई चाँही रोक्छन्। जसको मुटुमा स्वामी विवेकानन्दको मूल्य छ। हेलिकप्टर उतार्नमा आनाकानी, भाजपा कार्यकर्तामाथि आक्रमण यी सबै तृणमूलको जमिन चर्किँदैछ भन्ने सङ्केत हो।
तपाईँहरूले सङ्कल्प लिनुहोस्, गुन्डा र सिन्डिकेटबाट बङ्गाललाई बचाउनुस्। देशको अधिकतर राज्यमा हाम्रै पार्टी छ।
पञ्चायत चुनाउमा हिंसा चरममा छ। बुथहरू लुटियो। तर जनताले भाजपालाई भारी मतले जितायो। लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गर्न सक्दैन।
लोकसभा चुनाउमा अर्धसैनिक बलको उपस्थितिमा हुनेछ। निगरानी चुनाउ आयोगले गर्नेछ। पहिलो पनि बलियो सरकार बनाउन भोट दिनु भयो। नदिनु भएको भए भारत-बङ्ग्लादेशको विवाद समाप्तिने थिएन।
जलपाइगढीमा एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, त्यो हो महिला सशक्तिकरण। यो तीन तलाकको विषय हो। काङ्ग्रेसले आफ्नो अनुहार देखाइदियो। तुष्टिकरणको लागि काङ्ग्रेस कुन हदसम्म गिर्छ, त्यो त सबैले देखिसकेका छन्।
राहुल गान्धीले भने, उनीहरूले तीन तलाकलाई चल्न दिने रे। मुस्लिम छोरीहरूलाई बर्वाद हुन दिने रे।
काङ्ग्रेसले मुस्लिम छोरी, बहिनीहरूलाई अत्याचार गर्ने सहमति दिइसकेको छ। काङ्ग्रेसलाई सुप्रिम कोर्टको पनि पर्वाह छैन। दुइदिन अघि एक मुस्लिम छोरीको पीडाबारे पढें। उनले तीन तलाकको कारण जुन यातना भोग्नु पऱ्यो, त्यो पढेर मलाई धेरै कष्ट भयो।
तुष्टीकरणको लागि काङ्ग्रेसले आफ्नो रुप अघि राख्यो। म पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ पनि तीन तलाकको पक्ष राख्नेको साथमा किन हुनुहुन्छ? भन्नुहोस्, तपाईँ विरोधमा कि पक्षमा?
भाजपा महिला अधिकारकोलागि पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ। नेताजी सुभाषचन्द्र बोसले गरेको साहस सम्झेर यहाँको माटोको शक्तिबारे थाहा पाएँ। विश्वास भो कि किन तपाईँहरू दिदीको दादागिरीको विरुद्ध यहाँ उपस्थित हुनु भयो। यो साहसको लागि सबैलाई बधाई।
म तपाईँहरूबाट सुझाव लिन आएको हुँ। देशमा हामीले के गर्नुपर्छ, भन्नुहोस्। कस्तो नीति बनाउनुपर्ने हो, किसान, गाउँ, गरीब, युवा, शहरको लागि के गर्न सकिन्छ। लेखेर राख्नुहोस्, फेरि सरकार बनिनसाथ हामीले के के गर्नुपर्ने हो तपाईँहरूलाई सोधेरै गर्नेछौं।
आज दिदी डराएकी छन्। त्यो तपाईँको कारण हो। मोदीको कारण होइन। जोडले भन्नुहोस् भारत माता कि जय। वंन्दे मातरम। यो कलकत्तामा बसेको मानिसहरूले सुनुन्। दिदीको अत्याचार अब धेरै दिन टिक्ने छैन।